> Resource > Transfer > Solutions si ay u gudbiyaan Xiriirada in macruufka 7
Ka dib markii lagu casriyeeyo si macruufka 7 ama iPhone 5s ama 5c iPhone orodka ah ee macruufka 7, aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan xiriirada ka your computer, xisaab email, ama aaladaha Apple xitaa jir ah in macruufka 7 iPhone. Waxa ay u muuqataa waa quruxsan fudud si ay tan u sameeyaan. Si kastaba ha ahaatee, marka aad gacmaha aad ku yaal, waxaad laga yaabaa in aan isku buuqo. Waxyaabaha soo socda ayaa waxaan soo bandhigay doonaa siyaabaha ay u gudbiyaan xiriirada badbaadiyey meelo kala duwan si ay u macruufka 7. Akhri si aad u baratid wax dheeraad ah:
Qaybta 1. nidaameed Xiriirada xoojiyaa in iCloud in macruufka 7
Qaybta 2. Transfer Xiriirada Email Accounts in macruufka 7
Qaybta 3. Nuqul Xiriirada vCard Faylal ay si macruufka 7
Qaybta 4. Transfer Xiriirada ka ah Device Old macruufka in macruufka 7
Qaybta 5. Transfer Xiriirada ka Phone ah Android inay macruufka 7
Haddii aad isticmaali iCould in ay xiriir gurmad hor casriyeeyo si macruufka 7, markaas dhab ahaan waxaad isticmaali kartaa gurmad iCould ay u soo celiyaan xiriirada in macruufka brand-cusub 7 qalab u qalabaysan. Haddii aad tahay Apple qalab cusub macruufka 7 user, ha ka welwelin! Marka aad samayn gurmad la aaladaha kale ee Apple, halkan waxaad isticmaali kartaa si aad u hagaagsan iCould xiriirada si aad qalab cusub macruufka iyo sidoo. Waa mid aad u fudud.
Markaad dejinayso qalab macruufka, daaqad arbushin doonaa, oo bixiya fursad u Soo Celinta ka kaabta iCloud. Waxaa Tubada iyo raac dardar ah. Dhowr daqiiqo ka dib, xiriirada la synced doonaa in aad macruufka 7.
Xusuusnow: Soo Celinta ka kaabta iCould waxaa laga heli karaa oo keliya marka aad dejinayso ah macruufka 7 qalab cusub ama marka aad resetting goobaha oo dhan qalabka macruufka 7 ah.
Haddii aad rabto in lagu wareejiyo xiriirada ka xisaab email in macruufka 7, waxaad ku xirnaan karaan Lugood, xisaab email laftiisa, ama qalab dhinac saddexaad ah, sida Wondershare TunesGo. Lugood kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan xiriirada ka macaamiisha email in macruufka 7 Oo xisaab email qaar ka mid ah waxay bixiyaan doorasho u hagaagsan iyo waliba. Tusaale ahaan, Gmail nidaameed caawisaa dadka isticmaala si ay u soo diri xiriirada ka Gmail si macruufka 7 qalabka. Haddii aadan rabin inaad waqti ku lumiso Lugood ama xisaab email ah, waxaad dhab ahaan u baahan tahay TunesGo Wondershare. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad nuqul ka xiriirada ka macaamiisha email, sida Muuqaalka iyo Windows Live Mail, iwm si aad qalab macruufka ah. Haddii loo baahan yahay, waxa kale oo aad soo dhoofsadaan karo files vCard in macruufka 7 la TunesGo Wondershare .
Download version maxkamad free of Wondershare TunesGo!
Qaybta 3. Nuqul Xiriirada vCard Faylal ay ka Computer si ay macruufka 7
Haddii aad ku badbaadi xiriirada in vCard a on your computer, si ay u gudbiyaan xiriirada si aad macruufka 7 qalabka, waxaad isku daydaa inaad iCloud on your computer (Mac ayaa iCloud in aad rabtid System. Dadka isticmaala Windows u baahan tahay inaad kala soo baxdo iCloud for Windows PC gacanta) ama qalab saddexaad ee xisbiga (Wondershare TunesGo) si ay u dajiyaan xiriirada ka vCard hore gudbiyo.
Haddii aad u wareegeen ah macruufka 7 qalab cusub oo aad rabto si ay u gudbiyaan xiriirada ka qalab macruufka jir ah mid cusub, waxaa jira dhowr siyood oo aad ku xirnaan kartaa:
Xiriirada kaabta in iCloud oo hagaagsan la macruufka cusub 7 qalab ka dib;
Xiriirada kaabta in email xisaabaadka iyo ka dib iyaga u hagaagsan u qalab macruufka 7;
Isticmaal TunesGo Wondershare in aad nuqulka xiriir u qalab macruufka ah 7 ka mid duug ah,
Haddii aad tahay qof cusub oo kaliya in ay qalab macruufka 7 oo aad rabto in aad nuqulka xiriir ka Android ah, fadlan akhri sida ay u gudbiyaan xiriirada ka telefoonka ah Android inay iPhone 5s ama 5c iPhone .